Shirkadda Amal Express oo Siyadisay Waxqabadkeedii
Waxay Shirkadda Xawaladda Ee Amal Express Ent , Ogaysiinaysaa Bulsho Waynta Somaliyed, In Amal ay siyadisay Adegyadedii iyo waxqabadkii ay u qaban jirtay Mujtamaca Somaliyed ee ku teedsan Dunida Dacaladeda.
Amal waxay kusoo kordhisay bulshada, Adeeg kusalaysan degdeg siinyo , iyo in Lacagaha loodiro dadka eheladooda qarabadooda iyo kuwa beecmushtarkaba, inay amal ku bixindoonto in kusiman Laba(2) illaa Saddex(3) Saacadod Gudahod,iyadoo khidmad dherad ah lagaqaadin.
Howshaas oo hadda Tijaabadi ka gudubtay, ayaa waxa sababay kadib markii macaamisha iyo shacabka shirakddu ku xiran ay u soo gudbiyen shirkadda in ay dadku baahi uqaban inay lacagoda ku helan si ka deg deg siinyo badan sida ay hadda u shaqayaan shirakadaha xawaaladda, iyadoo aan laga qaadin khidmadda Dherad ah .
Lacaga Expresska ah , waxay Amal balanqadaysaa inay ku bixindoonto in kayar Soddon (30)Daqiiqo.
sidaas darted waxan u balanqadaynaa Mujtamaca Somaliyed in aad maqsuud ka noqon doontaan Adeegyada aannu idin hayno.
Haddaba, wixii talo iyo tusmayn ah oo ku sabsan hawlaha aannu idin hayno fadlan nagala soo xariira E-mailadan Hoose
Amal Publicrelation and Marketing Dept